UJacob the Jeweler uthenga i-Glittery yeedola ezingama-16.68M kwiPaki engu-432 | - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila UJacob the Jeweler uthenga i-Glittery eyi- $ 16.68M Perch kwi-432 Park
UJacob the Jeweler uthenga i-Glittery eyi- $ 16.68M Perch kwi-432 Park
Ukongeza okunye ukukhanya kwi-432 Park(Ifoto: Billy Farrell / Patrick McMullan)
Yongeza nje ukukhanya okukhazimle ngakumbi kwisibhakabhaka esibengezelayo.
UJacob the Jeweler (igama lokwenyani: UJacob Arabov ), kunye nenkosikazi yakhe, UAngela , bathenga igumbi lokulala elinamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlambela eyi-3.5 eHarry Macklowe I-432 Park Avenue .
Umnumzana Arabov waseka uJacob & Co ngo-1986, emva koko uphawu lwafumana ukwamkelwa xa i-Notorious BIG. uthathe ukuthanda iziqwenga ezigqunywe ngedayimani.
Ngokucacileyo uzenzele kakuhle kwiminyaka ukusukela, njengoko esi sibini sihlawule $ 16.68 yezigidi yokuhlala 3,576-yeenyawo-yokuhlala-UDouglas Elliman ulawula ukuthengisa kwisakhiwo-kwaye sinendawo yokuhamba ilifti yabucala, ilayibrari, kunye nophahla lweenyawo ezili-12'6. Okwangoku akukho lizwi lokuba uceba ukuhombisa ikhaya lakhe elitsha ngokuhonjiswa ngedayimani, kodwa sibambe ithemba (sitsalele umnxeba ukuba uyakwenza oko, Mnu. Arabov).
Kubonakala kukhuselekile ukucinga ukuba i-condo entsha kaMnu. Arabov iya kuba nentofontofo ngakumbi kunesisele sasentolongweni awasibiza ekhaya ukusukela ngo-2008 ukuya ku-2010 ngenxa yeentlawulo ezinxulumene nokukhohlisa iirekhodi kunye nokuxoka kubaphenyi-izityholo ezinxulumene nokusetyenziswa gwenxa kwemali zaphoswa.
Nangona kunjalo, isiseko sabathengi abadumileyo sika-Mr Arabov khange sibonakale ngathi-uVictoria Beckham, 50 Cent, Gisele Bundchen, kunye noJay-Z kunye nenombolo kaBeyoncé phakathi kwabathengi bakhe. Owu, kwaye unokongeza uRudy Giuliani kumxube wabathandi bakaJacob & Co, ngokunjalo. Ipatio yangaphandle ephantsi eneqhosha eliphantsi kwezinye iintlanganiso zesidlo sangokuhlwa.(Ifoto: UDouglas Elliman)
Lilonke, ayimangalisi into yokuba le ndoda yaziwa ngokugqwesa kwayo okungaphezulu, idayimani enezacholo ikhethe enye yezona nqaba ziphakamileyo esixekweni ukuba ziyibize njengekhaya.
Isakhiwo esinemigangatho engama-96 sineenyawo ezingama-30,000 zeenyawo zezinto eziluncedo, ezibandakanya indawo yokuphumla, igadi yangaphandle, indawo yokutyela yabucala, iphuli yokubhukuda yangaphakathi yeenyawo ezingama-75, kwaye, hleze umntu aphelelwe lithemba lokushiya indlu yakhe ngokupheleleyo, kukwakho nendawo yokutyela kunye nenkonzo yegumbi . Kwaye ke, iziko lokuzilolonga eligcwele ispa, i-sauna, umphunga kunye namagumbi okuthambisa-siva ukubala ii-carats zokuziphilisa kunokuba nzima njenge dayimani.
Ijethi yabucala kaElvis Presley ilungele ukuThengiswa ngeXabiso-ngeXabiso eliQinisekileyo
Indlela Yokuphila 2021
Ababuyisi bobuGcisa bafuna iCrackdown kwi'Botcher 'Emva kokuba omnye uMzobo utshatyalalisiwe
I-NYC's Top 10 Spin Studios Izamile kwaye yavavanywa
'Phuma' Izabelo zePot Twist Ngale '90s yeCult Film ... Kwaye akukho mntu uthetha ngayo
U-Kate Middleton wamnceda njani ukuba ajike iProjekthi yakhe yoBhubhane ibe yiNcwadi yesiNtu
Izinto ezingama-20 ezimangalisayo 'kwiNkwenkwezi ezelwe' ezingoBradley Cooper okanye iLady Gaga
Uloyiso lwesidlo esibi
Yintoni iOscar Win Win Ithetha Ngalunye lwaBantu abaTyunjiweyo boMfanekiso oLungileyo kulo nyaka
Umfundisi ophantsi komlilo ngokuthenga umfazi wakhe i-Lamborghini eyi- $ 200k inamaqhina kuTrump, uBieber kunye no-Oprah
URay Kelly, oxelwe kuLuhlu olufutshane kuKhokela i-FBI, uXhathisa amaGunya oLawulo lweMipu uTrump uyachasa
INkosana uPhilip yamkelwe esibhedlele eLondon emva kokuziva ugula
itsheki engenanto (ifilimu)
Ngaba i-rory iphela nge-logan
ndiyathemba ukuba eli nqaku liyakufumana uphilile
Iipesenti ezili-100 zokubonisana simahla eYurophu
art basel miami 2016 amaqela
ukufundwa simahla okuphakathi ngefowuni